Wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga 2016 ee soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga 2016 ee soomaaliya
September 20 (Mareeg)— Shirka wada tashiga ee looga hadlayo nooca doorasho ee ka dhici karta Soomaaliya sanadka 2016 iyo sida loo wajahayo marka waqtiga u dhamaado dowladda hada jirta ayaa waxaa soo baxaya qodobo badan oo dhinacyada shirka quseeyo isku hayaan.
Inkastoo gelinkii dambe ee maanta lagu waday in shirka laga soo saaro war murtiyeed ayaa waxaa taas hakiyay caqabado ka imaanaya Maamul goboleedyada, gaar ahaan Maamulka Puntland oo gebi ahaanba shirka isaga baxay.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa shirka uga baxay sababo la xiriira in wali dowladda Federaalka ay wax ka tabanayaan, gaar ahaan arrimihii Guddiyadii madaxa banaan ee horay Baarlamaanka Federaalka u meel mariyay
Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in aanay raalli ka aheyn inay meel wada fariistaan Galmudug, isla markaana aanay go’aan meel ku wada gaari karin, maadaama aysan aqoonsaneyn.
Arrinta kale ee shirka culeyska sii gelisay ayaa waxaa ka mid ah Maamulka Jubbaland, oo ku biiray Puntland, shirkana isaga baxay, waxaana dhankooda ay ku mowqif yihiin Puntland oo ay iyana wax la tabanayaan.
Waxaa kaloo arrimaha kale ee la isku haayo ka mid ah qaabka uu noqonayo is bedelka imaanaya 2016, waxaana la doonayaa in is bedelkaas uu noqdo ma ka wanaagsan 2012, cida soo xuli doonta Baarlamaanka soo socda ee bedelaya Baarlamaanka hada jira.
Caqabadaha ugu weyn ee la isku heysto ayaa waxaa uu yahay cida awooda u leh Xildhibaanada la soo xuli doono sanadka 2016, maadaama aanay deegaan walba laga soo dooran doonin, waxaa la ogeyn sida qodobkan la isugu waafaqi doono.
Maamul Goboleedyada ayaa u ololeynaya Xildhibaanada heer Federaal ay ka soo xulaan Gobollada iyo deegaanada ay mas’uulka ka yihiin, taasna waxay keeneysaa caqabad, maadaama aanay iyaga rabitaan shacab ku imaan, isla markaana ay adkaan doonta inay matali karaan masiirka umadda Soomaaliyeed.
Dowladda Federaalka ayaa dooneysa in soo xulida Baarlamaanka soo socda ay ku yimaadaan wada tashi guud, gaar ahaan Guddi ay ka kooban yihiin qeybaha bulshada, xukuumadda, baarlamaanka iyo maamul goboleedyada, waxaana taas qudheeda adkaaneysa sharciyadooda.
Xubnaha Beesha Caalamka ee qeybta ka ah shirka wada tashiyada ayaa wali arrinta ku dhex jira oo doonaya in xal la helo, waxaana kulamo gaar gaar ah la leeyihiin dhinacyada u socda shirka waxaana soo baxaya cadaadis lagu saarayo inay xal ka gaaraan arrimaha ay isku hayaan
Shirkii wada tashiga oo la soo gaba gabeeyay iyo Qodobo lagu heshiiyay